Uhuru iyo Trump oo Kawada Hadlaya Dagaalka Al-Shaabab iyo AMISOM – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Uhuru iyo Trump oo Kawada Hadlaya Dagaalka Al-Shaabab iyo AMISOM
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u amba baxay safar uu ku tagayo magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka kaa oo la filayo in uu kulan laqaato madaxweynaha dalkaasi Mr Trump sida uu daabacay wargeyska the Star ee kasoo baxa dalkaasi.
Kulankan oo lafilayo in uu dhaxmaro labada masuul ayaa ka dhici doono aqalka cad ee looga taliyo dalkaasi bishaasi 27 bishan August.
Madaxweyne uhura kenyata waxaa garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta kusa gootiyay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi William Ruto iyo hogaamiyaha ciidamadda difaaaca Kenya Mr Samson Mwathethe.
Dhanka kale kulankaan dhaxmari doono Uhura Kenyatta iyo Donald Trump ayaa lafilayaa in ay kawada hadlaan dagaalka ka dhanka ah Alshabaab iyo sidii dhamaan gobolka looga ciribtiri lahaa iyo howlgalka ciidamada midowga Africa Amisom ee nabad ilaalina U jooga Soomaaliya.
Xariirka soo jireenka ah ee udhaxeya labadaasi dal ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay aad uwanagsanaa iyadoona xariirka dhanka ganacsiga iyo xaalada nabad galyo ee dalalka dariska ah lafilayo in ay kawada hadlaan gaar ahan dalalka South Sudan,Iyo Somalia.
Mrs Monica Juma xogyaha wasaarada irimaha dibada Kenya iyo Mike Pomeo xoghayaha arimaha dibada mareykanka ayaa waxaa ay khamiistii aynu kasoo gudubnay ay ku kulmeen Mareykanka kuwaa oo gogol xaar unoqonaya kulankan lafilayo in ay wada yeeshaan labadaasi hogaamiye.